मेरी ख्रीष्टमस - ख्रीष्टमसको अर्थ, ख्रीष्टमसको महत्व - Nepali Christians Site
मेरी ख्रीष्टमस - ख्रीष्टमसको अर्थ, ख्रीष्टमसको महत्व
Posted by Resham Kumar sunuwar on December 20, 2013 at 11:00am
मेरी ख्रीष्टमस अहिले विश्वभरी ख्रीष्टमसको चहलपहल भईरहेको छ । कति मानिस ख्रीष्टमसको कुरा र अर्थ नबुझे पनि ख्रीष्टमस मनाउने काममा लागीरहेका छन् । तर हामी विश्वासीहरुको लागिचाहिं यो कुरा थाहा छ कि ख्रीष्टको जन्मसँगै ख्रीष्टमसको महत्व र सम्बन्ध जोडिएको हुनाले यसले गहिरो प्रकारको अर्थ बोक्दछ । आज संसारभरी मानिसहरुले एक आपसमा ख्रीष्टमसको शुभकामना आदन प्रदान गर्दछन् अनि उपहार लिने दिने गरेर एक–आपसमा खुशी साटासाट गर्दछन् । निश्चय पनि यो ख्रिस्टको जन्मको यो समयले सबै मानिस जातिको लागि परमेश्वरको प्रेम कति महान छ भनेर देखाउँदछ ।
डिसेम्बर २५ अर्थात पौष १० को दिनलाई विश्वभरी ख्रीष्टमस उत्सवमा रमाउँदछन् । बाइबल धर्मशास्त्रमा ख्रीष्टको जन्म भएको घटनासँगै ख्रीष्टमसको सम्वन्ध भएकोले विश्वभरीका इशाइहरुले यस समयमा ख्रीष्टको जन्म दिनको सम्झना गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी ख्रीष्टमस मनाउने गरिन्छ । किनकि ख्रीष्टमसचाहिं ख्रीष्ट येशूको जन्मको कारण शुरु भएको थियो । संसारमा मानिस जाति पापी भएको कारण परमेश्वरले उहाँको एकलौटे पुत्र येशूलाई यस संसारमा मानवको रुपमा पठाउनु भयो ताकि हरेक मानिसको उद्धार होस् र मुक्ति पाओस् । २०१३ वर्ष अगाडि ईस्राएलको वेतलेहेम भन्ने ठाउँमा येशूको जन्म भयो । त्यही येशूको जन्मको घटनाबाट नै ख्रीष्टमसको उत्सवको आरम्भ भएको हो । ख्रीष्टमसको दिन आउनु केही हप्ता अगाडिदेखि नै बजारहरूमा किनमेल गर्नेहरुको भिड लाग्दछ । विश्वभरी यो डिसेम्बर महिनामा मात्र खरबौ डलरको किनमेलमा करोबार हुने गर्दछ । ख्रीष्टमस इसाइहरूको पर्व भए तापनि अरुले पनि विभिन्न प्रकारले मनाउदै आएका छन् । ख्रीष्टमसको यो समयमा मानिसहरु “मेरी ख्रीष्टमस” वा “ह्यापी ख्रीष्टमस” भन्दै एक अपासमा शुभकामना अनि खुशी साटासाट गर्दै परमेश्वरको प्रेमको याद गर्नु अनि ख्रीष्टलाई हाम्रो हृदयमा जन्मन दिनु ख्रीष्टमसको महत्वपुर्ण पक्ष पनि हो ।
ख्रीष्टमस भनेको के हो त ?
ख्रीष्ट भनेको ग्रीक शब्द हो, जसको अर्थ हुन्छ अभिषेक गरिएको । मसको अर्थ चाहिं प्रार्थनाको विधि भन्ने हुन्छ । यसरी यो दुई शब्द मिलेर ख्रीष्टमस शब्द आएको पाईन्छ । येशू नामको अर्थ चाहिं मुक्ति दिने ब्यक्ति हुन्छ । उही शब्द हिब्रु अथवा यहुदीहरुको भाषामा मसिह हो । ख्रीष्टमसको अर्थ “मास अफ क्राईष्ट” अर्थात ख्रीष्टको जमातहरु जो भेला भएर प्रेमभोज गर्नु पनि हो । यस अर्थमा ख्रीष्टमस भनेको परमेश्वरकोजनहरुले ख्रीष्टको जन्मको दिनलाई विशेष रुपमा सम्झने दिनको रुपमा लिईन्छ । ख्रीष्ट येशू यस पृथ्वीमा मानव अवतार लिएर मानिस जातिको लागि मुक्तिको उपहार लिएर आउनुभयो भनेर ख्रीष्टमसको दिन विशेष रुपमा ख्रीष्टको प्रेम र शान्तिलाई पनि याद गर्ने समय हो । ख्रीष्ट येशू संसारमा सबै मानिसहरुलाई जीवन, शान्ति र आशा दिन आउनु भएको हो । ख्रीष्टमसको खुशीयाली पनि यसैमा लुकेको छ । नेपालमा पनि ख्रीष्टमसलाई नेपाली इशाइहरुले एउटा उत्सवको रुपमा मनाउदै आएका छन् । विश्वभरिका इशाइ र गैहृ्र इशाइहरुले पनि यो पर्वलाई मनाउदै आएको पाईन्छ ।
सन् ३२० को डिसेम्बर २५ मा पोप जुलियस प्रथमले ख्रीष्टको जन्मदिन मनाउनुपर्छ भनेर सर्वप्रथम आवाज उठाएका थिए । सन् ३५४ को डिसेम्बर २५ मा रोमको विशप लाइबेरियसले ख्रीष्टको जन्म दिन मनाउनु पर्ने व्यवस्था बनाएका थिए । यसरी विभिन्न समय र कालखण्डमा ख्रीष्टमस पर्व मनाउने कार्यको शुरुआत भएको पाईन्छ । ख्रीष्टमसको कहानी र यसको शुरु येशू ख्रीष्टको जन्मसँगै शुरु भएको हो । ख्रीष्टको जन्मको बारेमा बाइबल नयाँ करारको पुस्तक मत्ती १ देखि २ अध्यया र लूका १ देखि २ अध्ययाहरुमा बिस्तृतरुपमा पढ्न सकिन्छ । ख्रीष्ट येशू आम मानव जगतको लागि पापबाट मोक्ष गर्ने योजनाकोसाथ यस संसारमा मानव अवतारमा जन्म लिनु भएको कुरा सिङ्गो मानव जातिको लागि खुशीको कुरा हो । ख्रीष्ट येशूको जन्मको दिनलाई वडा दिन अथवा ख्रीष्टमस पर्वको रुपमा प्रत्येक सालको डिसेम्बर महिना भरी विश्व भरीका इशाइहरुले मनाउने प्रचलन रहिआएको छ । ख्रीष्टमस पर्व इशाइ समुदायहरुले मात्रै नभएर गैहृ इशाइ समुदायका मानिसहरुले पनि धुमधामसाथ रमाईलो गरी मनाउने क्रम तीव्र रुपमा वढेर गएको छ ।
शायद कतिले केवल चाडको रुपमा ख्रीष्टमसलाई लिए तापनि हामी विश्वासीहरुको लागि यो चाड भन्दा पनि बढी कुरा हो । किनकि ख्रीष्टमसचाहिं हाम्रो मुक्तिदाता अनि उद्धारकर्ता परमेश्वरको जन्मको उत्सव र हर्षेल्लासको कुरा हो । ख्रीष्टमसको एक हप्ता पछाडि नयाँवर्ष पर्ने भएकोले ख्रीष्टमससंग यसको सम्वन्ध रहेको छ । ख्रीष्ट जन्मनुभएको समयदेखि नै अंग्रेजी मिति कायम भएको छ । विफोर क्राईष्ट (वि. सी.) र एन्नो डोमिनी (ए. डी.) भनेको हामीले सुनेका छौं । येशूको जन्म भन्दा अगाडिको समयलाई (वि. सी.) भनिन्छ, भने येशू जन्मनु भए पछिको समयलाई (ए. डी.) भनेर भनिन्छ । यसरी येशूको जन्मको आधारमा अंग्रेजी मिति कायम भएको हामीले पाउँदछौ । ख्रीष्टमस मानव इतिहासमा येशू जन्मनुभएको दिन हो । येशू ख्रीष्टको जन्मले मानव इतिहासलाई दुई भागमा अर्थात् ईसा पूर्व र ईस्वी संवतमा विभाजन गरेको छ । ईसा पूर्व र ईस्वी संवतको शुरुवात ख्रीष्ट येशूका जन्मसँगै भएको हो । यो संसारको इतिहासमा एउटा सबैभन्दा महत्वपूर्ण घटनाको रुपमा लिईदै आएको पाईन्छ । अंग्रेजी मितिचाहिं ख्रीष्ट येशूको जन्मको आधारमा निर्माण गरिएको हो । सबै मानिसहरुलाई तिनीहरुका पाप बाट मुक्ति दिनलाई मुक्तिदाताको रुपमा येशूलाई अभिषेक गरिएको कुरा बाइबल धर्मशास्त्रले वताउँछ ।
कैसर (सम्राट) अगस्टस ख्रीष्टपूर्व ३१ देखि ईसा संम्वत १४ सम्म रोमी साम्राराज्यको सम्राट थिए । जो अहिलेको दक्षिण यूरोपको अधुनिक ईटालियाको राजधानी हो । जुन समयमा रोमीहरुले आफ्नो शासन वेलायत, फ्रान्स र मध्यपूर्वका देशहरु सम्म फैलाएको कुरा थाहा पाउँदछौं । जस मध्ये ईस्राएल र सिरिया पनि रोमीहरुको अधिनमा परेको थियो । येशू जन्मने वेला सिजर अगस्टसले आफुले जितेको सम्पूर्ण देशको प्रशासन वदलाउन र सुधार गर्नलाई सम्पूर्ण ठाउँमा जनगणनाको घोषणा गरे । यो जनगणना ख्रीष्टपूर्व (वि. सी.) ४ सम्ममा भएको थियो । जुन समयमा येशूको जन्म भएको थियो । येशूको आमा बुबा दाउदको घरानाको भएकोले जनगणनामा नाम लेखाउनलाई ईस्राएलको वेतलेहेम गाउँ जानु परेको थियो । जनगणनामा नाम लेखाउन येशूको आमा बुबा युसुफ र मरियम ईस्राएलको वेतलेहेम भन्ने गाउँमा जाँदा त्यही नै येशूको जन्म भएको थियो । येशूको आमा बुबा गालीलको नासरत भन्ने ठाउँको हुनुहुन्थ्यो । यद्यपि येशू ख्रीष्टको जन्म वेतलेहेम भन्ने ठाउँमा भएको थियो । मिका भन्ने अगमवक्ताले सैयौं वर्ष अगाडि येशू वेतलेहेम भन्ने ठाउँमा जन्मनु हुनेछ भनी गरीएको भविष्यवाणी यसरी पुरा भएको पाईन्छ, (मिका ५ः२) । परमेश्वरको योजना अनि प्रतिज्ञा बमोजिम येशूको जन्म पूर्णरुपमा पुरा भएको थियो । येशू ख्रीष्टको जन्मको महान अवसरमा सबैलाई मेरी ख्रीष्टमस ।
-रेशम कुमार सुनुवार Views: 359
Tags: article, christmas Like6members like this
Comment by Resham Kumar sunuwar on December 22, 2013 at 10:45pm thanks aruna ji Comment by aruna chhantyal on December 22, 2013 at 9:48pm merry christmas vannuvanda happy christmas vannu thik lag6 guruba kinaki merry vaneko enjoy arthat masti garnu vanne artha lag6.so 'HAPPY CHRISTMAS' Comment by Resham Kumar sunuwar on December 20, 2013 at 10:04pm lau thanksa Comment by Shrawan Bomjan on December 20, 2013 at 11:40am ख्रीष्टमसको अर्थ, ख्रीष्टमसको महत्व बारे बुझ्ने मौका दिनुभएको लागि धन्यबाद दाजु । हजुरलाई पनि ख्रीष्टमस शुभकामना । RSS